पहिराले घर पुरिँदा गोठमा बाख्रालाई घाँस हाल्न गएकी महिला सहित हजुरआमा र नातिनीको मृत्यु – News Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/पहिराले घर पुरिँदा गोठमा बाख्रालाई घाँस हाल्न गएकी महिला सहित हजुरआमा र नातिनीको मृत्यु
चितवन । अविरल वर्षासँगै खसेको पहिरोमा परी गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका–४ फुजेलमा एक महिलाको मृत्यु भएको छ । घर नजिकैको गोठमा बाख्रालाई घाँस हाल्न गएकी ३४ वर्षीया लक्ष्मी गुरूङको पहिरोमा पुरिँदा मृत्यु भएको हो । बिहान फुजेलको कौदीमा पहिरोमा परी स्थानीय लक्ष्मी गुरुङ्गको मृत्यु भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) सुरेन्द्र पौडेलले बताए । ‘स्थानीयवासीले गुरुङको शव पहिरोबाट बाहिर निकालिसकेका छन्,’ सिडिओ पौडेलले भने, ‘स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा प्रहरी घटनास्थल जाँदैछ ।’
सडक भासिएर गोठमाथिबाट खसेको पहिरोमा पुरिएर गुरुङको मृत्यु भएको स्थानीय दिपक गुरुङ्गले जानकारी दिए । पहिरोमा ४–५ वटा बाख्रा पुरिएको गुरुङले बताए । गोठ पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त बनेको छ ।
पहिराले घर पुरिँदा हजुरआमा र नातिनीको मृत्यु
त्यस्तै तनहुँको भानु नगरपालिका–९ सिमलगैह्रामा आज पहिराले घर पुरिँदा हजुरआमा र नातिनीको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा ८० वर्षीया तिलमाया धौराली र १५ वर्षीया शिताष्मा धौराली रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । स्थानीय मनोज धौलारीको घर पहिराले बगाउँदा दुवै जना बेपत्ता भएका थिए । बेपत्तामध्ये शिताष्माको उद्धार गरिए पनि अस्पताल लैजाने क्रममा बाटोमा निधन भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक युवराज तिमिल्सिनाले जानकारी दिए । तिलमायाको भने घटनास्थलमै शव निकालिएको छ ।
पहिराले पुरिएर तनहुँमा एकसाताको अवधिमा १३ जनाको मृत्यु भएको छ भने एक जना अझै बेपत्ता छन् । व्यास नगरपालिकामा पाँच, ऋषिङ गाउँपालिकामा पाँच र म्याग्दे गाउँपालिकामा एक जनाको मृत्यु भएको थियो । व्यासका एक जना भने अझै बेपत्ता रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
त्यस्तै अविरल वर्षापछि आएको बाढी पहिरामा परी जिल्लामा एक जना बेपत्ता भएका छन् भने तीन घर बगाएको र दर्जनौँ घर डुबानमा परेका छन् । खैरहनी नगरपालिका–११ का अन्दाजी ३० वर्षीय राजु बोटेलाई राप्ती नदीमा माछा मार्ने क्रममा नदीले बगाएर बेपत्ता बनाएको हो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार उनलाई आज साँझ ६ः१० बजेको समयमा नदीले बगाएपछि खोजी कार्य जारी रहेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार त्रिशुली नदी बढेर ईच्छाकामना गाउँपालिकाको फिस्लिङमा तीन घर बगेका छन् । त्यहाँ कुनै मानवीय क्षति भने नभएको उहाँले जानकारी दिए ।
नारायणी नदी बढेसँगै भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. २६ र १६ मा डुबान भएको छ । उहाँका अनुसार वडा नं. २६ का ३० घरका र १६ का १४ घरका बासिन्दालाई स्थानान्तरण गरिएको छ । नदीको बहाव बढ्दै गएकाले सतर्क रहन स्थानीय प्रशासनले आह्वान गरेको छ । नारायणी नदी किनारमा अनाथालय हाम्रो घरको आँगनसम्म पानीको बहाव आइपुगेको छ । पानी बढेमा त्यहाँ रहेका ३० जना आश्रितलाई अन्यत्र सारिने जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक नान्तीराज गुरुङले बताउनुभयो । नारायणी नदीको सतह सतर्कताको सूचीभन्दा माथि रहेको छ ।
चारकिलोको पहिरो पन्छाउने कामको मङ्गलबारबाट थालनी
निरन्तर वर्षासँगै पहिरो खस्ने क्रम जारी रहेपछि नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्डको चारकिलोमा आज दिनभर पहिरो पन्छाउने काम शुरु गर्न सकिएको छैन । मङ्गलबार बिहानबाट मात्र मौसम अनुकूल भएमा पहिरो पन्छाउने काम थालिने भएको छ ।
डिभिजन सडक कार्यालय भरतपुरका प्रमुख ई कृष्णराज अधिकारीका अनुसार काम थाल्नै नसके पछि साँझबाट त्यहाँ भएका उपकरण र जनशक्ति पृथ्वी राजमार्गको पहिरो पन्छाउने काममा परिचालन गरिएको छ । चारकिलोमा ठूलो पहिरोसँगै साना पहिराहरु खसेका छन् । पहिरो पन्छाउन नपाउँदै माथिबाट थप पहिरो खस्ने समस्या भएपछि काम अघि बढ्न नसकेको हो ।
ईच्छाकामना गाउँपालिका–६ मा पर्ने सो ठाउँ नारायणगढबाट ३१ दशमलब पाँच किलोमिटर दूरीमा पर्दछ । अधिकारीका अनुसार पहिराले करिब ६० मिटर क्षेत्र ढाकेको छ । सो सडकको अन्य पहिरो खस्नसक्ने ठाउँमा नियन्त्रणको काम भइसकेको भए पनि त्यस स्थलमा काम गर्न शुरु गरेलगत्तै पहिरो खस्न थालेको हो । सो सडकखण्डमा ठाउँठाउँमा खसेका साना पहिरो भने पन्छाउने क्रम जारीनै छ । चार किलो नजिकै चोर खोलामा खसेको पहिरो भने पन्छाउन बाँकी रहेको कार्यालयका ई शिव खनालले जानकारी दिए ।
पृथ्वी राजमार्गमा दुई सयभन्दा बढी ठाउँमा पहिरो
लगातारको वर्षासँगै पहिरो खसेपछि पृथ्वी राजमार्गको मुग्लिन–नौबिसे सडकखण्ड अवरुद्ध छ । अधिकारीका अनुसार सो सडकखण्डका २०० भन्दा बढी ठाउँमा साना–ठूला पहिरा रहेका छन् । चितवन र धादिङ जोड्ने मौवा खोलाको धादिङतर्फको पुल र राजमार्ग जोड्ने १२ मिटरभन्दा बढी भागमा खोला हिँडेको छ । उहाँका अनुसार सो खण्डको मौवा खोला, जोगिमारा, चेरेस, जवाङ्ग खोला, चुम्लिङ्टारलगायतका ठाउँमा पहिरो खसेका छन् ।
ई खनालले मौवा खोलाको पुल र सडक जोड्ने एप्रोज मर्मत सम्भार निकै कठिन भएको बताए । उनले भने, “त्यो काम गर्न केही दिन लाग्छ ।” साना–ठूला पहिरो हटाउन धेरै समय नलागे पनि मौवाखोलाको पुल नजिकैको बगेको भाग मर्मत गर्न समय लाग्ने बताउनुभयो । सडक ठाउँठाउँमा अवरुद्ध भएपछि अत्यावश्यक कामले हिँडेका यात्रु, बिरामी र मालवाहक सवारी रोकिएका छन् ।
दु:खद खबर, तिहारमा घर आउँन ला’गेका ३ जना नेपालीको भारतमा सडक दु’र्घटना ज्या’न गयो’
कोरोना सम्बन्धी नया तथ्य बाहिरियो।रुघा खोकी भन्दा पहिले देखिन्छन यस्ता संकेत,हजुरलाई पनि यस्तै भएको छ भने सावधान भइ हाल्नुहोस।नछुटाई पढ्नुहोला
भर्खरै चोर नेताले नेपाली भुमीको दलालको बिसयमा सबै पोल खुल्यो3करोड नेपाली रिसले आगो अब जेलमा कोचिने भय